10-ka dhacdo ee Layaabka leh oo la saadaalinyo dhammaadka xilli ciyaareedkan… (Ole oo la burin doono, Barcelona, Juve, Arsenal, Inter, Liverpool & Man City maxaa ku dhici kara dhamaadka kal Ciyaareedkan?) – Gool FM
10-ka dhacdo ee Layaabka leh oo la saadaalinyo dhammaadka xilli ciyaareedkan… (Ole oo la burin doono, Barcelona, Juve, Arsenal, Inter, Liverpool & Man City maxaa ku dhici kara dhamaadka kal Ciyaareedkan?)
(Yurub) 12 Sebt 2019. Bilawga kal ciyareed walba waxaa la saadaaliyaa dhacdooyinka lagu taamayo inay dhacaan, iyadoo aan loo fiirinaynin dhanka taageerenimada, qaar ka mid ah saadaashaasi waxay noqotaa kuwo rumooba.
Saadaashu waxa ay ku xiran tahay in la qiimeeyo tayada kooxaha kubadda cagta ee tartammada ka qeyb galaya iyo xiddigaha ay ku qaabeysan yihiin xilli ciyaareedkan 2019-2020.
Xilli horyaallada kala duwan ee caalamka ay bilaw yihiin ayaa la saadaalinayaa in ay dhammaadka fasal ciyaareedkan dhici karaan 10 dhacdo oo xiiso badan, laga yaabee in ay saadaalintaani ku xiiso galiso, waase macquul inay kaa nixiso.
Waxyaabaha la saadaalinayo waxaa ka mid ah in macallinka Man United ee Ole la cayrin doono, iyo kooxaha waa weyn sida Barcelona, Arsenal, Liverpool, Man City, Juventus, Inter iyo kuwo kaleba koobabka ay qaadi karaan.
Warbixnintaan waxaa inoo diyaariyay wariyaheenna Shaafici Maxamuud Nuur (Shaafinho), ka daawo muuqaalka hoose fikirkaagana inoogu reeb qeybta faallada.
Pierre-Emerick Aubameyang oo indhaha ku haya inuu u dhaqaaqo dalka Spain… (Kooxdee ayuu ku biirayaa ma Real Madrid mise Barcelona?)
“Ma heli doontid qof kale oo isaga la mid ah, meel kasta oo adduunka ah” – Sánchez
Magaceygu waa Aadan maxamed joga south africa sandakan barcelona waxey qadeysa champion leuge iyo laliga